Isbahaysiga La Dagaalanka Argagixisada Ee Uu Hogaamiyo Sucuudiga oo Shiray. – Shabakadda Amiirnuur
November 27, 2017 5:47 am by admin Views: 236
Isbahaysiga la dagaallanka waxa loogu yeero Argagixisada ee uu hogaamiyo Sucuudiga ayaa shir ku yeeshay dalka Masar, waxaana ay isla garteen qodobo dhowr ah.
Isbaheysigan oo la sameeyay sanadkii 2015kii ayaa waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo dadka muslimiinta ah ee isbadal doonka ah kana xun dhibaatada iyo gumaadka uu Mareykanku ka wado in badan oo kamid ah dalalka dunida islaamka.
Dhaxal sugaha qoyska reer Aala Sucuud, sidoo kalena ah wasiirka gaashaandhigga dalka oo shirkan ka hadlay ayaa sheegay in kulankoodu uu farriin xoog leh u dirayo waxa uu ugu yeeray argagixisada ayna ka go’an tahay la dagaalankooda.
Isbahaysigan ayaa wakiil ka ah Mareykanka iyadoo shaqada ay qabanayaan iyo dagaalka ay ku jiraan uu yahay kan Mareykanka, waxaana uu dagaalkoodu gaaray heer ay u gafaan nusuusta sharciga ah ee ka hadleysa Al-walaa’ walbaraa’ iyo Jihaadka.
Isbahaysigan daba dhilifka ah ayaa ka kooban 40 dowladood oo ka taliya dhulalka Muslimiinta waxaana ka mid ah Sucuudiga, Turkiga, Pakistan, Malaysia iyo Masar.
Isbahaysigan oo bishii May dalka Masar kula shiray Sayidkooda Mareykanka ayaa sheegay iney diyaar u yihiin iney bixiyaan 34,000 oo askari oo u dagaalanta mashruuca Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada.
Dalka Sucuudiga waxaa ku xiran kumannaan culimo ah oo loo heysto iney ka hadleen arrimo masiiri ah iyo arrimo la xiriira tawxiidka, waxaana muuqanaysa in Islaamku marayo meel lamid ah qurbadii uu kusoo bilowday.